Ohatrinona no tokony hohanin'ny Spaniel Cocker-ko | Alika Manerantany
Iray amin'ireo karazana alika malaza indrindra ny spaniel akoho, biby manana endrika afaka manalefaka ny fon'ny olona. Ho fanampin'izany, io no refy mety indrindra ahafahana miaina na amin'ny trano sy amin'ny trano ambanivohitra. Ary, toy ny hoe tsy ampy izany dia mankafy ankizy izy.
Na izany aza, mba hahasambatra, ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra tokony hataonao dia ny mihinana. Fa ohatrinona? Andao hojerena ohatrinona no tokony hohanin'ny spaniel mpampihinana ahy.
1 Inona no tokony hohanin'ny spaniel mpampinono ahy?
2 Ohatrinona ny sakafo tokony homeko azy?
2.1 * Maina aho
2.2 * Mihevitra aho fa lena
2.3 Sakafo voajanahary (ao anatin'izany ny Yum Diet na mitovy aminy)
Inona no tokony hohanin'ny spaniel mpampinono ahy?
Ny spaniel akoho, toy ny alika rehetra, biby mpihinana hena izy izay tsy maintsy mihinana hena. Rehefa omena sakafom-biby ianao na karazan-tsakafo hafa izay misy serealy, lafarinina na vokatra azo avy amin'ny vokatra dia azo inoana fa hanana olana ara-pahasalamana ianao amin'ny ho avy. Ireo olana ireo dia mety miainga amin'ny alikaola "tsotra" ka hatrany amin'ny zavatra matotra be kokoa toy ny aretin-tratra.
Noho io antony io, hialana amin'izany tena ilaina tokoa ny mamahana azy amin'ny sakafo matsiro hatramin'ny andro voalohany dia ao an-trano ianao. Amin'izany dia hiantohana izahay fa ny fivelaran'izy ireo sy ny fahasalamany ho tonga lafatra.
Ohatrinona ny sakafo tokony homeko azy?
Hiankina amin'ny karazan-tsakafo tianao hoentiny izy io. Ohatra:
* Maina aho
alika: eo anelanelan'ny 150 sy 200 grama.
olon-dehibe: eo anelanelan'ny 300 sy 360 grama.
* Mihevitra aho fa lena
alika: manodidina ny 250 sy 300 grama.
olon-dehibe: eo anelanelan'ny 350 sy 400 grama.
Sakafo voajanahary (ao anatin'izany ny Yum Diet na mitovy aminy)
alika: eo anelanelan'ny 6 sy 8% ny lanjany.
olon-dehibe: 2% amin'ny lanjany.
Zava-dehibe ny fanananao rano madio sy madio foana hahafahanao mameno ny tenanao isaky ny mila izany ianao.
Manantena izahay fa izao dia afaka hahafantatra, bebe kokoa na latsaka, hoe ohatrinona no tokony hohanin'ny volonao 🙂.
* Ny isa dia manondro. Ny habetsaky ny vola tokony homenao azy dia hambara ao amin'ny kitapo famahanana mba hisorohana azy tsy ho be loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ohatrinona no tokony hohanin'ny spaniel mpampinono ahy?
Alejandro Rosa Reyes dia hoy izy:
Ny biby dia lasa ampahany amin'ny fiainanao dia mamorona fifamatorana amin'ny iray izay indraindray dia lasa toy ny zaza hafa izy ireo satria manahy ny sakafony ianao, mandro azy ireo, milalao azy ireo mandritra ny fotoana fohy, tsy mangatsiaka izy ireo, tsy lena, ary ianao tsara ry zareo ratsy fa ho faly foana izy ireo fa ianao milaza aminy ny anarany farafaharatsiny.
Valiny tamin'i Alejandro Rosado Reyes
Fa maninona ny alika no milelaka ny ranon'alika hafa?
Ahoana ny karazana amerikana Staffordshire Terrier